firefox အတွက် အချက် ( ၂၃ ) ချက် [Article]
Myanmar IT Resource Forum » ARTICLES ZONE » » Article Page » firefox အတွက် အချက် ( ၂၃ ) ချက် [Article]
about:config ဆိုတာ firefox ရဲ့ core configuration ပါ .. အဲဒီနေရာလေးမှာ အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်သလိုလေးတွေပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် .. firefox ကို page loading လုပ်တာတွေဘာတွေကိုမြန်အောင်ပေါ့ ...စသဖြင့် ပါ .. ကျွန်တော်တို့ အဲဒါတွေကို သွားပြင်ကြည့်ရအောင်ပါ ... အရင်ဆုံး ပြင်ဖို့အနေနဲ့ about:config ကို firefox ရဲ့ address bar မှာ ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Enter ခေါက်လိုက်ပါ ...အဲဒါလေးကို ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင် သူက မေးပါလိမ့် မယ် အဲဒါကို ပြောင်းတာမှာ ဘာဖြစ်တယ် ညာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ .. ထားလိုက်ပါ ..I'll be careful , I promise ပေါ့ ဘာဖြစ်လဲ သူသိတာမှတ်လို့ အဟဲ ..ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြင်မဲ့နေရာကလေးကို ရောက်ပါပြီ ဗျာ.. ကဲ စလိုက်ကြရအောင် ...
အဲဒီ about:config ဆိုတာထဲက address bar ကလေးထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပြီးရှာလိုက်ပါ .. အောက်က ပြင်ရမယ့်နေရာလေးတွေကို
၁ ။ကိုယ်ရိုက်တဲ့ Url တွေကို သူ့အလို လို ပြည့်စုံအောင်ပါ..
browser.urlbar.autoFill ကို ရိုက်လိုက်ပါ အဲဒါကို false ကနေပြီးတော့ true ထားလိုက်ပါ ။
၂။ addressbar မှာ ကိုယ်ဖွင့်ချင်သလောက် ကိုယ် ဖွင့်ရအောင် .
browser.urlbar.maxRichResults ဆိုတာလေးကို ကိုယ် ကြိုက်သလောက် ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ..
သူ အရင် က သတ်မှတ်ထားတာက ၁၂ ခုပါ .. အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ဖွင့်နိုင်အောင်ပါ ..
၃။ firefox ကို အမြန်နှုန်းမြှင့်ခြင်း ..
network.http.pipelining ကို false ကနေပြီးတော့ true ကိုထားလိုက်ပါ ..
network.http.pipelining.maxrequests ကို နဂို 30 ကနေပြီးတော့ 8 ကို ထားလိုက်ပါ .
network.http.max-connections ကို နဂို 30 ကနေပြီးတော့ 96 ကိုထားလိုက်ပါ ..
network.http.max-connections-per-server ကို နဂို 15 ကနေပြီးတော့ 32 ကိုထားလိုက်ပါ ..
network.http.max-persistent-connections-per-server ကို နဂို6ကနေပြီးတော့ 8 ကိုထားလိုက်ပါ ..
network.http.pipelining.ssl ကို false ကနေပြီးတော့ true ကိုထားလိုက်ပါ ..
network.http.proxy.pipelining ကို false ကနေပြီးတော့ true ကိုထားလိုက်ပါ ..
၄။ ကိုယ် သုံးနေတဲ့ အချိန် မှာ စိတ်အနှောင်အယှက်ဖြစ်အောင်ပေါ်လာတဲ့ feature လေး တွေကို ပိတ်ထားရအောင်ပါ ...
အောက်ကထြားတဲ့ value တွေ အကုန်လုံးကို false ထားလိုက်ပါ ...
၅။ တွေ့ဖူး မှာပါ ခုန်နေတဲ့ စာကလေးတွေက မခုန်တော့အောင် လုပ်ကြရအောင်ပါ ..
browser.blink_allowed ဆိုတာလေးကို true ကနေပြီးတော့ false ထားပေးလိုက်ပါ ..
၆။ ကိုယ်က link တစ်ခုကို နှိပ်မယ်ဆိုရင် နောက် tab တစ်ခု မှာရှာအောင် လုပ်တာပါ..
browser.search.openintab ကို false ကနေပြီးတော့ true ကိုထားလိုက်ပါ ...
၇။ prefetch တွေကို disable လုပ်ထားရအောင်ပါ ..
network.prefetch-next ကို true ကနေပြီးတော့ false ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ ..
အဲလို လုပ်တာလေးက အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ google မှာ ရှာတာတို့ internet speed နှေးနေတာတို့ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာ Ram နည်းနေတာတို့ မှာ
၈။ browser toolbar က အချက်ကလေးတွေကို disable ပေးထားတာပါ ..
browser.chrome.toolbar_tips ကို true ကနေပြီးတော့ false ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ..
၉။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်တာလေးတွေကို ပြောင်းခြင်းပါ ..
layout.spellcheckDefault ကို အရင် 1 ကနေပြီးတော့2ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ ...
၁၀။ site က Favicon icon လေးတွေကို တွေ့ဖူးမှာပါ .. အဲဒါလေးတွေကို ဖျောက်ထားရအောင်ပါ ..
browser.chrome.site_icons ဆိုတာလေးကို false ကလေး ထားပေးလိုက်ပါ ..
၁၁။ single click ပေးပြီးတော့ enable နဲ့ disable လုပ်တာလေးတွေကို ပြောင်းတာပါ ..
browser.urlbar.clickSelectsAll ကို True ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ..
browser.urlbar.clickSelectsAll ကနေပြီးတော့ False ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ..
၁၂။ middle mouse ကို click လုပ်ရုံနဲ့ copy paste လုပ်တာပါ ..
middlemouse.paste ကို True ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ...
၁၃။ address bar မှာ စာရိုက်ရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့စာလေးတွေ ကျကျလာတာလေးတွေ မြင်ဖူးမှာပါ အဲဒါလေးတွေ ကို ဖျောက်တာပါ ..
extensions.checkCompatibility ဆိုတာလေးကို False ပေးလိုက်ပါ..
extensions.checkUpdateSecurity ဆိုတာလေးကို False ပေးလိုက်ပါ ..
၁၄။ firefox မှာ tab ကလေးတွေကို ကြည့်ဖူးမှာပါ ..အဲဒါလေးကို အကန့်အသတ်ကလေးနဲ့လုပ်ထားတာပါ . ကိုယ်ကျယ်ချင်သလောက်ကလေးပေါ့ ...
browser.tabs.tabMinWidth ကို 75 ပေးလိုက်ပါ ..
75 က အနည်းဆုံး ပေးနိုင်တဲ့ အကျယ်ပါ .. ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ထားလို့ရပါတယ် ..
၁၅။ firefox window တစ်ခုတည်းမှာ tab တွေအများကြီးဖြစ်အောင် လုပ်တာပါ ..
browser.tabs.tabMinWidth ကို 75 ပေးလိုက်ပါ .. အပေါ်ကနဲ့အတူတူပါပဲ ..
၁၆။ ကိုယ်ပိတ်လိုက်တဲ့ tab ကလေးတွေမှာ အရေးကြီးတာလေးတွေပါသွားရင်ပေါ့ ပိတ်လိုက်တဲ့ tabs ကလေးတွေ ကို ပြန်ခေါ်တာမှာ များများပြန်ခေါ်လို့ရအောင်ပါ ..ပြန်ခေါ်တာကတော့ Ctrl+Shift T ပါ..
browser.sessionstore.max_tabs_undo ကို 15 ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ.. နဂို သူပေးထားတာက 10 ပါ ..ကြိုက်သလောက်ထည့်လို့ရပါတယ် ..
၁၇။ R click ထောက်လိုက်ရင် ပေါ်တဲ့ view source ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ editor နဲ့ ပြောင်းတာပါ ..
view_source.editor.external ကို True ပေးလိုက်ပါ ...
view_source.editor.path ကိုတော့ ကိုယ် က ဘာနဲ့ ဖွင့်မှာလဲ .. ဖွင့်မယ့် exe ရဲ့ နေရာလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ..
ဥပမာ .. notepad နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် သူရှိတဲ့နေရာကလေးက C:\_Program Files\_npp.4.8.2.bin\_notepad++.exe အဲဒီနေရာလေးကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ ..
၁၈။ firefox add-ons တွေထည့်တ့အခါမှာ စောင့်ရတဲ့ အချိန်ကို ပြောင်းပလိုက်တာပါ ...
security.dialog_enable_delay ကို0ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ...
ဒီနေရာမှာ0က တော့ add-ons ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ စောင့်ရမယ့် အချိန် ကို ဆိုလိုတာပါ ..
၂၀။ mouse က scrolling ကို ပိုပြီးတော့ မြန်အောင်လို့ လုပ်တာပါ ...
toolkit.scrollbox.scrollIncrement ကို 75 ထားပေးလိုက်ပါ ... သူပေးထားတာက 20 ပါ ..
၂၁။ ဒါကတော့ linux users တွေအတွက် သီးသန့်ပါ .. ဒီအောက်က နေရာကလေးတွေကို ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ..
network.protocol-handler.app.ed2k ကို /usr/bin/ed2k ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ..
network.protocol-handler.external.ed2k ကို တော့ true ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ..
၂၂။ firefox မှာဖွင့်ထားတဲ့ tab တွေကို အကုန်လုံးကို ပိတ်လို့ရအောင် button ကလေးတစ်ခု ဖန်တီးကြည့်ရအောင်ပါ ..
browser.tabs.closeButtons ဆိုတာလေးကို3ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ..အဲဒီ3ကတော့ tab3ခုဆိုရင် ပိတ်တဲ့ခလုတ်ကလေးတစ်ခု လုပ်တာပါ ..ညာဘက်ထောင့်နားလေးမှာ အဲဒါလေးကို မြင်ရမှာပါ .. တစ်ခုချင်းစီမှာတော့ မရှိတော့ပါဘူး ..
၂၃။ Save link as လုပ်တဲ့ အချိန် ကလေးကို ပိုပြီးတော့ မြန်အောင်လို့ တိုးကြည့်အောင်ပါ ..
Browser.download.saveLinkAsFilenameTimeout ဆိုတာလေးကို 2000 ဆိုပြီးတော့ ပေးလိုက်ပါ ..
သူရဲ့ ပေးထားတဲ့ တန်ဖိုးက အစက 1000 ပါ ( 1 second ) ပါ .. 1000 ထက်ပိုပြီး သုံးလို့ရပါတယ် .. 1000 က msec (meter per second) ပါ ..
ကဲ အဲလောက်ဆိုရင် firefox ကို modify လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် .. အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ ...
Re: firefox အတွက် အချက် ( ၂၃ ) ချက် [Article]
on 6th August 2009, 6:04 pm by sHa92
ကျန်တဲ့ Feature တွေရှိသေးလားမသိဘူး
on 6th August 2009, 9:41 pm by alt.332
ကျေးဇူးတအားတင်တယ်ဗျာ..ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မစမ်းနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်...အိမ်က COnn က လျှောက်ထားပေမယ့် အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် နောက်မှလျှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ အချိန်ကြာသွားတော့ စမ်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်...ကျောင်းမှာသုံးတော့လည်း ဟီး... Connection က နောင်တော် $ƴǩǾ သိမယ်ထင်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် စမ်းလို့ကိုမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်
on 6th August 2009, 11:58 pm by K0ht3t
နောက်ထပ် feature ကလေးတွေ တော့ ရှိသေးတယ်ဗျ ..နောက်မှ ပဲ တင်ပေးမယ်ဗျာ နော် ...ကျွန်တော်လည်း ရှာလို့တွေ့တာလေးတွေကို ဘာသာပြန်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ..
on 7th August 2009, 9:09 am by C0D3R